के सस्तो तेल किनेर भारत र चीनले रुसलाई सहयोग गर्दैछन् ? – News Dainik
के सस्तो तेल किनेर भारत र चीनले रुसलाई सहयोग गर्दैछन् ?
News desk ९ असार २०७९, बिहीबार ०६:३७ विदेश प्रतिकृया दिनुहॊस
बीबीसी । युक्रेनमा भएको आक्रमणपछि पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए । यसले रूसलाई आफ्नो अर्थतन्त्र बचाउन नयाँ उपायहरू खोज्न बाध्य तुल्यायो । रूसले आफ्नो विशाल तेल र ग्यास उद्योगको लागि नयाँ ग्राहकहरू खोज्नुपरेको थियो । फलस्वरूप, अब रुस चीनको तेल र ग्यासको मुख्य आपूर्तिकर्ता बनिसकेको छ । रूसी सरकारले कथित रूपमा चीनलाई तेल र ग्यासको मूल्यमा छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ । यसले आफ्ना उत्पादनका लागि नयाँ बजार खोज्न मद्दत गर्‍यो ।
त्यस्तै रुसले पनि आफ्नो तेल र ग्यास बेच्न भारतलाई सम्पर्क गरेको थियो । तथ्याङ्कका अनुसार युक्रेनमा आक्रमण हुनुअघि रुसको कुल तेल निर्यातको एक प्रतिशत मात्रै भारतलाई बेच्ने गरेको थियो तर मे महिनामा यो संख्या बढेर १८ प्रतिशत पुगेको छ ।
यी कारणहरूले गर्दा, तेल र ग्यास निर्यात आम्दानी घट्दै गए पनि, ऊर्जा क्षेत्रबाट हालको आम्दानी युक्रेनमा सैन्य अपरेसनहरू, अन्य चीजहरूको साथमा कभर गर्न पर्याप्त छ ।
सस्तो तेल र ग्यास
चीनबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार मे महिनामा रुसबाट कच्चा तेलको आयात ८४.२ लाख टनको रेकर्ड स्तरमा पुगेको छ । यसमा पूर्वी साइबेरियन प्रशान्त महासागर पाइपलाइनबाट आउने कच्चा तेल पनि समावेश छ । यसरी गत वर्षको तुलनामा मे महिनामा रुसबाट कच्चा तेलको आयात ५५ प्रतिशतले बढेको छ ।
विश्व बजारमा अहिले कच्चा तेल प्रतिब्यारेल ११० डलरको रेकर्ड उचाईमा पुगेको बेला रुसले चीनलगायतका देशलाई प्रति ब्यारेल ३४ डलरमा अफर गरेको छ ।
सिनोपेक र जेनहुआ आयल जस्ता चिनियाँ सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूले विगत केही महिनामा पहिलेभन्दा धेरै कच्चा तेल खरिद गरेका छन् । रुसले यी कम्पनीहरूलाई कच्चा तेलको मूल्यमा उल्लेख्य सहुलियत दिएको थियो, किनभने युक्रेनमा हमलापछि पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका थिए । जसका कारण पश्चिमी देशका क्रेताहरूले रुसी तेल र ग्याँस खरिदबाट टाढिए । बदलिएको अवस्थामा साउदी अरेबिया अब रुसपछि चीनको दोस्रो ठूलो तेल निर्यातकर्ता बनेको छ । मे महिनामा साउदी अरेबियाले चीनलाई ७८.२ मिलियन टन तेल आपूर्ति गरेको थियो । तर, आर्थिक प्रतिबन्धको सामना गरिरहेका देशहरूमध्ये चीनले रुसबाट मात्रै तेल किनेको होइन । यो सूचीमा इरान पनि परेको छ । सोमबार जारी गरिएको तथ्यांक अनुसार चीनले मे महिनामा इरानबाट २.६० लाख टन कच्चा तेल किनेको थियो । डिसेम्बर यता इरानसँगको यो तेस्रो तेल सम्झौता हो ।
सेन्टर फर रिसर्च अन एनर्जी एन्ड क्लिन एयर (सीआरईए) द्वारा गत हप्ता जारी गरिएको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक प्रतिबन्ध लगत्तै रुसको पेट्रोलियम उत्पादनको बिक्री निरन्तर घटेको छ ।
यद्यपि, यस प्रतिवेदनमा रूसले आफ्नो निर्यात जारी राख्नका लागि कानुनी कमिहरू खोज्ने बारे धेरै चेतावनी दिइएको छ ।
त्यसमध्ये एउटा कच्चा तेललाई प्रशोधनका लागि भारतजस्ता तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरी प्रशोधित तेल युरोपेली मुलुकमा पठाउन सकिन्छ । यो रिपोर्टले भारतलाई रिफाइनिङका लागि बढीभन्दा बढी रुसी तेल निर्यात हुने गरेको छ । र त्यसमध्ये धेरैजसो रिफाइन्ड तेल युरोपमा पठाइन्छ । रसियाले नयाँ बजारहरू खोजिरहेको अवस्थामा तेल पाइपलाइन र जहाजहरूद्वारा पठाइने गरेको छ ।
युरोपका देशहरू अझै पनि रूसको तेल र ग्यासका मुख्य ग्राहकहरू छन् । एक अनुमान अनुसार युक्रेनमा भएको आक्रमणको पहिलो सय दिनमा रुसले तेल र ग्यास निर्यातबाट करिब ९७ अर्ब डलर प्राप्त गरेको थियो । त्यसमध्ये ५९ अर्ब डलर युरोपेली संघका देशहरूमा निर्यात भएको थियो ।
रुसबाट हुने पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै सहमति हुन सकेको छैन । युरोपेली संघले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा रुसबाट समुद्री मार्गबाट कच्चा तेलको आयात रोक्ने योजना बनाएको छ । यसो भए त्यहाँबाट हुने तेल आयातमा करिब ६० प्रतिशतले कमी आउनेछ ।
थप रूपमा, युरोपेली संघले मार्चमा रूसबाट एक वर्ष भित्र कम्तिमा दुई तिहाई ग्यास आयात कटौती गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
तर, अमेरिकाले रुसबाट तेल, ग्यास र कोइला खरिदमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । अर्कोतर्फ, बेलायतले सन् २०२२ अघि नै त्यसो गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
रुसको वर्तमान अवस्थाको भारत र चीन दुवैले पूरा फाइदा उठाइरहेको छन् भने युरोपेली प्रतिबन्धको प्रभाव छिट्टै देखिने भएकाले यस्तो लामो समयसम्म नहुने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
अघिल्लॊ आजदेखि २७ जिल्लाका बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिइँदै
पछिल्लॊ बुबाको निर्णयमा असहमति, सरकारी गाडी तोडफोड